डोटा2- 1xBet
1xbet प्रत्यक्ष सहायता
1म 1xbet.co xbet टर्की प्रत्यक्ष सट्टेबाजी साइट
डोटा २ ले राम्रो गरिरहेको छैन – पछिल्लो तथ्या .्क4यस वर्षको सबैभन्दा खराब
डोटा, संसारमा सबै भन्दा धेरै खेलाडीहरूको साथ एक खेल 2, यो हरेक दिन रगत बगिरहेको छ.
टर्की संसारका लाखौं प्रेमीहरू हुन् र यो निश्चित रूपमा डोटा २ हो जुन सबै कुरामा राम्रो हिंड्दैन. २ खेलाडीहरूको मासिक औसत खेलाडी तथ्या .् 2014 अप्रिल देखि यो खराब भएको छैन.
2011यसको सुरूवात भएदेखि, खेल लगातार बढि खेलाडीहरू संलग्न गराएर एक बढ्दो ग्राफिक तान्यो। 2015 यो ग्राफिक मार्च सम्म सुरक्षित गरियो. 2015 २००, मा केही महिनाको गिरावट पछि पुन: प्राप्ति गर्न थालेको खेल, फेरि जहाँसम्म यो पतन भएको थियो फेरि माथि उक्लियो 2016 अक्टुबर सम्म.
प्रोमो कोड: 1x_107498
2016 अक्टूबरमा मासिक खेलाडीको तथ्याre्कमा कमी गर्नुहोस् जुन त्यस दिनदेखि पुन: प्राप्त गरिएको छैन. हामीले पछाडि छोडेको महिना 780.000 औसत खेलाडीसँग बन्द हुने खेल अन्तिम अप्रिल २०१ 2014 मा भएको थियो,(प्रमोशनको त्यस्तो नराम्रो तथ्यांक थियो.
किन र किन यो बिन्दुमा पुगेको यो कौतूहलको विषय हो।. यसका लागि धेरै सिद्धान्तहरू अगाडि राखिन्छन्।. सँगै तिनीहरू मध्ये सबै भन्दा तार्किक मूल्यांकन गर्नुहोस्।.
1) एस्पोर्ट्स स्टेज ग्लोबल र स्थानीयमा कुनै लगानी छैन
1.1) एस्पोर्ट्स स्टेज अन्तर्राष्ट्रिय हुँदै
तपाईंलाई थाहा छ, डोटा २ मा, स्थानीय लिग प्रणाली जस्तै लिग अफ द लिजेन्डहरूको स्थानीय प्रशासकीय प्रणाली छैन जुन छ र. जसले खेलाडीहरुलाई प्रतिस्पर्धा मात्र स्तरमा राख्छ जुन विश्वव्यापी छ. यहाँ सम्म कि शीर्ष प्रतिस्पर्धा छ खेलाडीहरूले प्रदर्शन गर्न वा उनीहरूको प्रतिस्पर्धी सन्तुष्टिको लागि क्षेत्र पत्ता लगाउन सक्दैनन्, किनकि खेल प्रतिस्पर्धी हो यो निश्चित रूपमा विश्वव्यापी हो।.
हामी सँगै गणना गरौं; पप्पी, कुरोकी, ब्रह्माण्ड, डर, डेन्डी, EE, नोट, फ्लाई, अनुहार-, एक्लो, s4 बढी छ र. हामी यी नामहरू २०११-२०१ hearing पछि सुन्न आएका छौं।. खेलमा, थोरै कलाकारहरूले विश्वव्यापी चरणको लागि समात्न सक्छन्. होईन. हामी मिरकललाई नयाँको रूपमा गणना गर्न सक्दछौं, हामी सुमिललाई नयाँ गन्ती गर्न सक्छौं ता कि हामी जहाँ हेर्छौं 4. तर हामी जे भए पनि वर्ष गणना गरौं. यसको शीर्षमा हामी केहि बढी गणना गर्दछौं तर अझै हामी पर्याप्त गर्न सक्दैनौं. हामी सबै समय उस्तै नामहरू देख्छौं, जसले दृश्य सुधार गर्न सक्दैन भनेर देखाउँदछ।.
स्थानीय लिग प्रणालीको अभावका कारण, शीर्ष-स्तरीय छ खेलाडीहरूले पनि आफ्नो टीमको बस्न र विकास गर्न समय पाउँदैनन् जुन यो निश्चित छ र किनकि उनीहरूले यस खेल मार्फत आय आर्जन गर्न सक्दैनन, र त्यसैले उनीहरूले करियरको लागि अर्को खेल छान्नुपर्दछ वा खेलबाट बाहिर क्यारियरमा जान्छन्। रहनु.
त्यो अवस्था हो जुन हामी टर्कीका उदाहरणहरू दिन्छौं वा स्थानीय टोलीका फ्यानहरूलाई रुचिका दृश्यहरू हरेक दिन Dota'nı esp हराउने खेलाडीहरू फेला पार्न असमर्थ छन्।. यसले दुबै देश मा डोटा उत्साह र देश भित्र खेल को बारे मा जागरूकता लाई असर गर्छ।. जब त्यस्ता परिस्थितिहरू संयोजन गरिन्छ, खेलाडीहरूको संख्यामा कमी अपरिहार्य छ।.
1.2) स्थानीयमा लगानी छैन.
हामीले माथि पनि उल्लेख गर्यौं, जब स्थानीयमा कुनै लगानी हुँदैन, स्थानीय टोली र खेलाडी सजिलै आफैलाई ठूलो मञ्चमा देखाउन सक्दैनन्. यसले सीधा त्यस देशबाट नयाँ खेलाडीहरूको बहिष्कारलाई असर गर्दछ।. यस कारक बाहेक;
जब त्यहाँ कुनै स्थानीय लिग प्रणाली र स्थानीय आधारमा प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने संस्था हुँदैन, स्थानीय आधारमा कुनै विज्ञापन कार्य छैन, खेल त्यो हो र नयाँ प्लेयरहरूमा पुग्न सक्दैन. मानौं कि लिग अफ लिजेन्ड्सले यूट्यूबबाट विज्ञापन दिन्छ र स्थानीय कफि शपहरूमा पनि टूर्नामेंटहरू आयोजना गर्दछ, यो ठूलो अभाव हो।. यी कमजोरीहरूको परिणाम स्वरूप, कुनै नयाँ खेलाडीहरू खेलमा आउँदैनन्, जुन पुरानो हो र तथ्या and्कहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् जब उनीहरूले समयको साथ विभिन्न कारणका लागि खेल छोड्छन्।.
2) खेलको मनोरञ्जनात्मक प्रभाव नवीनताहरू त्यो हो र यसको स्तरमा
2.1) खेलको फन मोडहरू कुनै लामो मनोरञ्जनात्मक छैनन्
डोटा 2, विशेष गरी उनीहरूको प्रारम्भिक चरणहरूमा “छेउ-खेल” एक अविश्वसनीय डिग्रीमा सुन्दरको रूपमा यसको गतिविधिहरू कम गरेर खेललाई अझ अप्रिय बनायो।. यो छिसी, उसले यी खेलहरूबाट आर्थिक रूपमा नाफा कमाउन जारी राख्यो, यो पक्कै पनि उसले हातमा दिएको इनाम र खेलको अन्त्यको आधारमा कंजूस हो।.
सबैलाई सोध्नु. के हामी यसलाई दिशातिर आउन चाहँदैनौं?? के हामी फ्रोसिभियस आउन चाहँदैनौं?? के हामी खेल्ने छैनौं यदि उही खेल उही इनाम संरचनाको साथ आयो?? हामी पक्कै खेल्छौं. उनले यो केवल हाम्रो लागि मात्र नभई धेरै फोरमहरूमा, विशेष गरी रेडडिटमा, जुन विश्वव्यापी खेलाडीहरू हो भन्ने अभिव्यक्त गर्दै आएका छन्, तर कुनै परिणाम आएको छैन।.
डाइरेक्टको सट्टा एक खेल आउँछ यो मात्र हो र यसको मालिकहरू भाग लिन सक्छन् वा 10 तपाईंले एउटा खेल खेल्नु पर्छ जुन यसको मूल्य बजारमा छ 50 एक पैसा जो एक उपहार जीत गर्न सक्नुहुन्छ.
प्रतिस्पर्धात्मक मोडको थप, यस्तो सामग्रीमा कमी जुन तनाव र खेलाडीको मनोरञ्जन गर्दछ खेलाडीहरूको स in्ख्यामा भएको गिरावटको एक प्रमुख कारक हो।.
2.2) कुनै स्तरमा नवीनता
म सुन्न सक्छु “हालका दुई नायक र 4-5 आइटम आयो नवीनता यो पक्कै पनि छ” तपाईँ के भन्नुहुन्छ. तपाईं नायकहरू बारे सही हुनुहुन्छ, तर आईटमहरू ... हामी हाम्रो खेलमा उल्का हथौड़ा र एयन डिस्क कति देख्छौं? कति हामी कसरी Nullifier देख्न? त्यस्तै, यी नयाँ वस्तुहरू, यो परिवर्तनको सट्टा एउटा थप हो. परिवर्तन MMR प्रणाली परिवर्तन गर्नु हो र यसलाई ब्याज प्रणालीको साथ बदल्नु हो।.
यसमा निश्चित रूपले माथिल्लो बदलाव आएको थियो र अर्को पटक ब्याज आए औसत खेलाडीहरूको तथ्या came्कहरू, मानिसहरूले सोचे कि केही नयाँ आउँदैछ जब ब्याज प्रणाली आइपुगेको थियो, तर त्यसले प्रणालीमा केहि पनि परिवर्तन गर्दैन भनेर बाहिर जान्छ।. नयाँ प्रणाली केवल MMR प्रणाली चित्रण थियो. मानिसहरूलाई पनि यो अवस्था मनपर्दैन।.
यी सबैको संयोजनमा, हामी बुझ्न सक्दछौं किन खेल प्रत्येक दिन चल्दछ. हामीले डटा २ को समस्याहरू जतिसक्दो सम्भव भए सम्बोधन गर्न प्रयास गर्यौं. हामी तपाईंको विचार सुन्न चाहन्छौं. तपाईं हाम्रो सामाजिक मिडिया पोष्टहरूमा आफ्नो राय व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ।.
कसरी ई-स्पोर आयो??
ई-खेलको जन्म वास्तवमै तपाईले सोचे भन्दा धेरै पुरानो हो।. 70१ 1980 and० र १ 1980 s० को दशकमा आर्केड हलहरूको व्यापक प्रयोगको साथ, खेलहरू खेल्दै र सँगै प्रतिस्पर्धा गरेर युवा व्यक्तिको समाजीकरणले ई-खेलको मूल गठन गर्दछ।. निजी कम्प्युटरहरू घरहरूमा प्रवेश गर्छन्, इन्टरनेटको प्रसार र बिभिन्न प्रतिस्पर्धी खेलहरूको उदयसँग, आज e-sports छिटो विकास र प्रसार गर्दैछ।.
आज, धेरै राष्ट्रिय र धेरै ई-खेल प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिएका छन्।. यी टूर्नामेन्टहरूले खेलाडीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पेशेवर वातावरण प्रदान गरी इलेक्ट्रोनिक खेल र खेल अवधारणाको विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन्।. प्रत्येक दिन आधिकारिक र निजी टूर्नामेंट आयोजनाको संख्या त्यो हो र देखाइएको रुचि बढ्दैछ।, तदनुसार, ई-एथलेट्सको लागि पेशेवर पेशाको रूपमा प्रदर्शन गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त छ।. अब, ई-खेल टूर्नामेन्टहरू लाखौं डलर सम्म र पुरस्कारमा हजारौं दर्शकहरू सम्म, ईन्टरनेटमा सयौं हजारौं प्रत्यक्ष प्रसारण पछि घटनाहरूमा परिणत भएको छ।. सयौं ई स्पोर्ट्स क्लबहरू ई-स्पोर्ट्सका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न कम्पनीहरू र प्रायोजकहरूको छातामा स्थापित भएका छन् र यी क्लबहरू नियमित रूपमा स्पोर्ट्स क्लबको रूपमा तालिम लिन्छन्।, बिभिन्न लिग र टूर्नामेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् र आवश्यक परेको खण्डमा स्थानान्तरण गरेर उनीहरूको स्टाफलाई सुदृढ पार्नुहोस्।. थप रूपमा, विश्वका विभिन्न देशहरूमा, तिनीहरूले ए-एथलेटहरू हो भनेर गणना गरी एथलीट इजाजतपत्रहरू प्राप्त गर्न सुरु गरेका छन्।. तुर्की मा 2014 को रूपमा लाइसेन्स देशहरूमा सामेल भएको छ.
एस्पोर्ट्स के हो? बोरा कोस्याइतले फन्याटिकलाई भने!
स्टीव, DOTA को एक विकासकर्ता, दंगा खेलहरू द्वारा “गिन्सो” यो आधारभूत हो र DOTA का एक उदाहरण हो जुन Feak को नेतृत्वमा देखा पर्‍यो।. DOTA बाट खेलमा यसको फरक छ” र “रन्स” एक प्रणाली छ. DOTA भन्दा फरक, हामीले LOL मा प्रयोग गर्ने नायकहरूको क्षमतामा प्राप्त योगदानहरू यो थप्न सकिन्छ निश्चित रूपमा वस्तुहरू।. लामो समयदेखि टर्कीको लागि छुट्टै सर्भर यो निश्चित रूपमा टर्कीमा खेल र शाखा हो. हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरू बीच दot्गा खेलहरू द्वारा, टर्की हुनु पर्छ, र टर्की भर मा विभिन्न आधिकारिक प्रतियोगिता आयोजित छ, यी घटनाहरू हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठूलो ई-खेल घटनाहरू मानिन्छ।. Galatasaray, Beşiktaş र Fenerbahçe सँग टोलीहरू पनि छन्.
DOTA2यो कसरी खेल्ने हो?
पूर्वजहरु संग रक्षा(DOTA) वारक्राफ्ट III, रणनीति खेलको लागि उत्पादन गरिएको मोडको रूपमा उत्पन्न भयो, खेल कम्पनी भल्भको साथ विकासकर्ता आइसफ्रगको सम्झौताको साथ DOTA2वारक्राफ्ट III को नामबाट स्वतन्त्र, छुट्टै खेलको रूपमा पोष्ट गरिएको.
खेल पाँच व्यक्तिको बैठकको दुई टोलीको रूपमा लिन्छ. खेलको सुरूमा, प्रत्येक खेलाडी एक नायक हो(नायक) छनौट गर्दछ. त्यसोभए यो निश्चित रूपमा अन्य नायकहरू र कम्प्युटर नियन्त्रित राक्षसहरूसँग लड्ने खेलाडीहरू हो जुन स्वचालित रूपमा सिर्जना हुन्छ. खेलमा अन्य नायकहरू र राक्षसहरूलाई मारे पछि, तपाईं पैसा पोडर र कौशल अंक कमाउन सक्नुहुन्छ, स्तरहरू बढाउन र सुविधाहरू सुधार गर्न, र तपाईं आफ्नो पैसा प्रयोग गरेर आफ्नो नायक किन्न सक्नुहुन्छ।. खेलको मुख्य लक्ष्य भनेको उनीहरूको कुनामा प्रत्येक टीमको मुख्य भवनको रक्षा गर्नु र विपरीत टीमको कुनामा मुख्य भवन ध्वस्त पार्नु हो।. पहिलो टीमले यो जित्यो. आमेचर / प्रोफेशनल टूर्नामेन्टहरू हाम्रो देशका बिभिन्न संस्थाहरू द्वारा आयोजित गरिन्छ।. (ई-बर्गी प्रयोग गरिएको छ)
अघिल्लो: काउन्टर स्ट्राइक
Next: महापुरूषहरूको लिग
1xbet eSpor बाहिस
| परिमाण एएफ विषयवस्तुहरू द्वारा.